स्पेन द्वारा ट्रेन: टिकट र थप कसरी खरिद गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > स्पेन द्वारा ट्रेन: टिकट र थप कसरी खरिद गर्न
द्वारा लौरा थोमस-Gilks 19/06/2018
रेल यात्रा, रेल यात्रा स्पेन, रेल यात्रा सुझावहरू, यात्रा युरोप 0
तपाईं स्पेन खर्च गर्न दुई हप्ता छन् भने, वरिपरि प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक ट्रेन द्वारा स्पेन अन्वेषण गर्न छ. मात्र यो देश वरिपरि केही अविश्वसनीय ठाँउहरु हेर्न अनुमति दिन्छ, तर स्पेन रेल यात्रा धेरै कुशल र सजिलो छ. मुश्किल भाग रेल टिकट खरीद छ. किन्न सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईंको रेल टिकट to travel to Spain by Train is online. त्यहाँ तपाईंले यो के गर्न अनुमति वेबसाइटहरु को एक नम्बर हो. प्रमुख प्रयोग मा सजिलो सर्तहरू मा तपाईं को लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने एउटा फेला पार्न छ, भाषा, र बजेट. आफ्नो टिकट खरीद प्रारम्भिक तपाईं लिन अनुमति दिन्छ फाइदा पक्का सम्भव विशेष दर साथै उनीहरूले पूर्णतया बुक बन्न अघि तपाईं गर्न चाहेको रेल मा प्राप्त.
अगाडि योजना र प्राप्त गर्न अग्रिम आफ्नो टिकट बुक तपाईंको रेल यात्रा को बाहिर सबै भन्दा राम्रो. यो एक नजर दुई-हप्ता यात्रा ट्रेन द्वारा स्पेन वरिपरि यात्रा को लागि. यो तपाईंको अर्को यात्राको लागि एक पुस्तिका होस्.
हाम्रो पहिलो स्पेन ट्रेन द्वारा मैड्रिड छ (दिन 1- 3)
यो स्पेनिश राजधानी हो र यो दुवै पुरानो र नयाँ एक राम्रो मिश्रण छ, सुरुचिपूर्ण पार्क संग, अविश्वसनीय किनमेल, vibey नाइटलाइफ र को पाठ्यक्रम Malasana क्षेत्र. मैड्रिड स्पेन शीर्ष संग्रहालयहरु धेरै घर पनि छ. धेरै घर अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता काम. धेरै छ किनभने त्यसैले यो शहरमा गर्न आफ्नो3दिन यहाँ राम्रो-खर्च हुनेछ. यसलाई आफ्नो दुई-हप्ता यात्रा एक राम्रो सुरुवात हो र एक रेल प्राप्त गर्न सजिलो यहाँ पनि ठाउँबाट गर्न. मैड्रिड पनि सबैभन्दा सुन्दर को एक छ स्पेन मा रेल स्टेशन.
सनसेबास्टियन (दिन3- 5)
यो सुन्दर सानो शहर मा स्पेन गरेको बास्क देश छ र Biscay को खाडी मा सही छ. यसलाई जो दिनमा सबै ध्यान प्राप्त दुवै समुद्र तट र पहाड प्रदान गर्दछ, तर रात आउँछ जब यो सबै पुरानो टाउन तपाईं delectable खानको-आकार व्यञ्जन लागि pintxo बारहरू दर्जनौँ रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ जहाँ बारेमा. पुरानो टाउन pintxos संग समाप्त Playa डे ला Concha साथ एक साँझ पैदल सम्झना छैन. ट्रेन द्वारा स्पेन संग San सेबस्टियन गर्न प्राप्त त्यहाँ मैड्रिड प्रत्येक दिन देखि कम्तिमा चार रेल हुन् सजिलो छ.
प्यामप्लोना (दिन5– 6)
यो शहर विवादास्पद को घर हो को बुल्स को चलिरहेको जो प्रत्येक वर्ष जुलाई मा स्थानहरू लिन्छ, तर त्यहाँ धेरै यो भन्दा प्यामप्लोना थप छ. यसलाई जो त्यहाँ को अविश्वसनीय दृश्य हो मतलब Navarre प्रान्तमा एक पहाडी को शीर्ष मा स्थित गर्नुपर्छ पहाड र घाटिहरुमा तल. शहर सानो छ सजिलो वरिपरि र हिंड्न र सुन्दर वास्तुकला लिन बनाउँछ जो इतिहास. त्यहाँ वर्षैभरि एक जीवंत बार र तपस दृश्य हो. पुरानो टाउन मार्फत एक पैदल सम्झना छैन वा बुल्स को दौड समयमा लिएको मार्ग retracing. अन्तमा, यो शहर पनि बाट सजिलै पहुँच छ सनसेबास्टियन र छोटो रेल सवारी टाढा.
ट्रेन द्वारा स्पेन – बार्सिलोना रेल (दिन6- 9)
यो समुद्र-शहर स्पेन सबैभन्दा चिरपरिचित र लोकप्रिय शहर मध्ये एक हुन छ, र यो निराश छैन! चाहे तपाईं कला र संस्कृति खोजिरहेको, वास्तुकला, अन अल्छी दिन समुद्र तट, सबै-रात दल वा नयाँ शहर अन्वेषण, त्यहाँ बार्सिलोना सबैका लागि कुरा हो. को Sagrada परिवार नछुटाउनुहोस्, जो आधुनिक संसारको सबैभन्दा नाटकीय संरचना को छ. ट्रेन द्वारा स्पेन बार्सिलोना गर्न प्यामप्लोना देखि बारम्बार रेल प्रदान गर्दछ र मात्र एक छ चार घण्टे यात्रा दुई शहर बीच.
भ्यालेन्सिया (दिन9- 10)
छोटो स्पेन मात्र ट्रेन द्वारा बार्सिलोना देखि सवारी, भ्यालेन्सिया अक्सर द्वारा अनदेखी छ पर्यटक. यो सानो शहर प्रदान गर्न धेरै छ र यसलाई अलिकति अन्वेषण गर्न एक दिन लिइरहेको राम्रो मूल्य छ. यसलाई माध्यम हिंड्न सुन्दर शहर छ र एक छ शानदार ताल र ट्रेल्स हिड्ने. थप आराम कुरा खोज्दै ती लागि समुद्र तट र Albufera पार्क को एक विस्तृत चयन छ. एक पैदल सम्झना छैन, चालु वा Turia गार्डन मार्फत चक्र – स्पेन मा सबै भन्दा ठूलो शहरी पार्क को एक. त्यहाँ बार्सिलोना बाट भ्यालेन्सिया गर्न दैनिक चलाउन धेरै रेल छन्.
मैलेंगा (10 - 13)
एक संस्कृति एक भू-मध्य महसूस संयोजन आधुनिक कला ट्रेन द्वारा स्पेन यात्रा र विकास सम्भव छ, मैलेंगा स्पेन गरेको दक्षिणी कोस्टा डेल सोल मा पाउन सकिन्छ. शहर को केन्द्र नव पुनःस्थापित र एक गोथिक गिर्जाघर र साँघुरो मध्ययुगीन पैदल सडकमा जोडती गरिएको छ आधुनिक बारहरू र हिप रेस्टुरेन्ट. मैलेंगा भ्रमण गर्न केही साँच्चै अविश्वसनीय तटों र यसलाई वरपरका सुंदर पहाड छ. को Gibralfaro गर्न चढाई सम्झना छैन महल को भव्य Andulasian सूर्यास्त र शहर को सास-लिने दृश्य लागि. त्यहाँ भ्यालेन्सिया देखि मैलेंगा गर्न दैनिक चलिरहेको रेलका छन्.
ओस्लो – ट्रेन द्वारा पछिल्लो एक हाम्रो स्पेन सूची
ओस्लो मात्र मैलेंगा देखि छोटो रेल सवारी र बस रूपमा शानदार छ. को नजर को एक विचार प्राप्त र धेरै ऐतिहासिक अवधि तत्व जोडती यो शहर को महसुस गर्न फिर्ता रोमन साम्राज्य गर्न लाग्छ. त्यहाँ शहर मा गर्न धेरै छ, को Arenal चौथाई साथ भटक शहर अन्वेषण देखि नदी गएर गर्न शानदार रेस्टुरेन्ट वा सहरका ऐतिहासिक घन्टी मा एक गोरु जुदाई हेर्दै. ओस्लो गरेको गिरजाघर र Alcázar एउटा यात्रा नछुटाउनुहोस्, जो बाट Thrones को हिट टिभि खेल दृश्य फिलिम गर्न प्रयोग गरिएको थियो. जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ दैनिक मैलेंगा देखि ओस्लो र ओस्लो फिर्ता मैड्रिड गर्न चलान गाडिहरु.
यो दुई-हप्ता यात्रा तपाईं आफ्नो यात्रा को सबै भन्दा बनाउन मदत र ट्रेन द्वारा स्पेन अन्वेषण हुनेछ. बुकिंग रेल टिकट हाम्रो सुझाव जहाँ तपाईं जान र रमाइलो गर्न सकून् भनेर आफ्नो छुट्टी सजिलै चल्छ भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईं प्राप्त गर्न सक्षम छन् सुनिश्चित हुनेछ. जे भएपनि, कि छ के बिदाको लागि हो!
If you need other युरोपेली ट्रेन टिकट, बस क्लिक यहाँ र हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र सवारी आनन्द.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spain-by-train/- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#रेल यात्रा	स्पेन	रेल
नर्वे यात्रा कसरी फरक यात्रा अनुभव छ
रेल यात्रा नर्वे, यात्रा युरोप 0
रेल यात्रा, यात्रा युरोप 0
रेल यात्रा, रेल यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा बेलायत, यात्रा युरोप 0